Guddoomiyihii G/Shabeellaha Hoose oo ka hadlay xilka qaadista lagu sameeyay - Awdinle Online
Guddoomiyihii G/Shabeellaha Hoose oo ka hadlay xilka qaadista lagu sameeyay
Gelinkii dambe ee Maanta ayaa Madaxweynaha Maamul Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta-gareen waxaa uu xilkii ka qaaday Guddoomiyihii Gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo xilkaasi soo qabtay laba jeer, iyada oo xilkaasi loo magacaabay Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidii oo isaga laftiisu xilkan horey usoo qabtay.
Gudodomiyihii xilka laga qaaday ee Gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo xilka qaadista lagu sameeyay ka hadlay ayaa soo dhaweeyay, isaga oo u hambalyeeyay Guddoomiyaha Cusub ee Gobolka Shabeellaha Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidii.
Qoraal uu soo dhigay Bartiisa Facebook ayuu uga mahad celiyay Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo xilka Guddoomiyenimo horay ugu Magacaabay, waxaana uu sheegay in uu la Shaqeyn doono guddoomiyaha Cusub
Hoos Ka Akhriso Qoraalka Guddoomiyihii Gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax.
Waxaan u hambalyeena Walaalkey Cabdiqaadir Siidii oo Madaxweynaha Koonfurgalbeed u magacaabay Gudoomiyaha Gobolka Shabellaha hoose, Siiidi waa waaya-arag wax badan u soo joogay xaaladaha is bad-badal ee Gobolka.
Alle hala garab galo masuuliyadda aan ogahay culeyska ay leedahay,waxaan diyaar u ahay inaan la shaqeeyo oo aan garab siiyo.
Waxaan u mahadcelinaa Madaxweyne Cabdicasiis oo inta aan la shaqeenayay ii ogalaaday inaaan si hufan oo daacad ku jirto ugu adeego bulshadeena.
Xilku waa meeeto waana sunno isbadalka.
Previous articleDowladda oo ku dhawaaqday qorsho looga hortagayo fatahaadaha & Ayaxa
Next articleSarkaal ka tirsan Maamulka Magaalada Beledweyne oo Caawa la dilay